ငါ့ နှလုံးခုန်သံတွေ နှေးသွားလိုက် မြန်လာလိုက်
မင့် မျက်ဝန်းလေး ပြေးသွားလိုက် ပြန်လာလိုက်
ငါ့ရှေ့က ရေမြောင်းဘောင်ဟာလည်း ကျဉ်းသွားလိုက် ကျယ်လာလိုက်
ငါ့ ကောင်းကင်က လတစင်း လင်းသွားလိုက် ကွယ်သွားလိုက်
ငါ ရပ်နေတဲ့ မြေကြီးတောင် မြင့်လာလိုက် နိမ့်ဆင်းလိုက်...နဲ့
ကြည့်နေခဲ့တဲ့ ကြယ်တစင်း ငါ့ရင်ကို ထုတ်ချင်းဖောက်...
အိပ်မက်ထဲမှာတောင် နတ်ပြည်ကို ရောက် ရောက်နေခဲ့....
တမက်တမော ပေးဆပ် ပုံအပ်...
ငါ့ နောက်ဆုံး ထွက်သက်လည်း မင့်လက်ထဲမှာ
မင်း စီရင်တာမှန်သမျှ လည်စင်းခဲ့ရပြီ
တရိရိနဲ့ ကျွမ်းဝင် စွဲမက်
ငါ့အနား ငါနဲ့အတူ ရှိနေပေးစမ်းပါ
ငါ့ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ အတူရှိနေစမ်းပါ...
ငါ မရှိတော့တဲ့ တနေ့
ကျမ ချစ်တဲ့ ကိုဒိုးလုံးအတွက် သူ့ရဲ့ "အရိုးထိအောင်ရူး" သီချင်းလေးကို ခံစားပြီး ရေးစပ်ပါတယ်။
သူ့လိုပဲ အချိန်မတိုင်မီ စောစီးစွာ ကြွေလင့်သွားသူများအတွက်....
ကျမ ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်....
ကျမ မသိသော အရိုးထိအောင် ရူးခဲ့ကြသူများ အတွက်ပါ....
အရိုးထိအောင် ရူးခြင်းမှ လွတ်အောင် ရုန်းထွက်နိူင်ကြပါစေ....
သက်ဝေ Thu Aug 19, 10:52:00 PM GMT+8
ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီး ပြိုလဲ မှောင်မိုက်နေလဲ...
ငါ မင်းတယောက်တည်းကိုပဲ ရင်ထဲမှာအမြဲ...
ဘဝ တသက်စာ... ဘဝ တသက်စာ....
ဒိုးလုံးရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ မရင်းနှီးခဲ့ဘူး...
အခုလိုလေး နားထောင်ရတာ ကျေးဇူး...
ကဗျာလေးကတော့ တကယ်ပဲ အရိုးထိအောင် ရူးစေတယ်...
မောင်မောင် Fri Aug 20, 02:16:00 AM GMT+8
အရိုးထိတော့မစွဲဘူး ဒါပေမယ့် ချဉ်ဆီမှာတွယ်ကပ်ပေါက်ရောက်နေတယ်။ :)
သီချင်းသိပ်နားထောင်လေ့ရှိသူမဟုတ်တော့ ( နားမထောင်ဖူးတော့လေ)
ဝက်ဝံလေး Fri Aug 20, 04:11:00 AM GMT+8
ဒိုးလုံးဆိုတာ ကျောက်လုံးရဲ့ အကိုလားဟင် ဟိ
စ တာနော် ဟဲဟဲ
အိမ့်ချမ်းမြေ့ Fri Aug 20, 08:20:00 AM GMT+8
malayy kabyar phat thwar tal..
Maung Myo Fri Aug 20, 09:42:00 AM GMT+8
ဒိုးလုံးသီချင်းတွေ သိပ်မကြိုက်ပေမယ့် အဲ့တစ်ပုဒ်တော့ အရမ်းကြိုက်တယ် စာသားတွေက အရမ်းမိုက်လို့ ။ ထပ်နားထောင်သွားတယ်ဗျ ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Aug 20, 11:06:00 AM GMT+8
အရိုးထိအောင် ရူးခဲ့ကြသူတွေထဲ ဘယ်သူတွေများ ပါနေကြပါလိမ့်..
ကိုယ်တိုင်ရော ပါနေခဲ့သလား ???
ပြန်စဉ်းစားဦးမယ် အစ်မရယ်း)
Anonymous Fri Aug 20, 02:01:00 PM GMT+8
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ သီချင်းဖန်တီးရှင်ထဲမှာ ဒိုးလုံးလဲပါတယ်
သဒ္ဓါလှိုင်း Fri Aug 20, 02:23:00 PM GMT+8
An Asian Tour Operator Fri Aug 20, 02:38:00 PM GMT+8
ခိုင်နုငယ် Fri Aug 20, 04:46:00 PM GMT+8
အဟုတ်ဖြစ်မယ်နှော်။း)း)
ညိမ်းနိုင် Fri Aug 20, 06:54:00 PM GMT+8
Kaung Kaung Fri Aug 20, 08:30:00 PM GMT+8
အမရေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချောစုခင်တောင် ကလေးမွေးပြီးသွားပြီ..
ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား ဆိုသလိုပဲ.. ဘာမှကြာကြာမခံဘူးအမရေ.. . (သီချင်းက သီချင်းအတိုင်းပဲကောင်းပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ သီချင်းတွေနဲ့ဘ၀ကိုရောပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးတယ်။)
အစွဲအလန်းတွေနဲ့ ... (အိမ်မက်ထဲတောင် နတ်ပြည်ရောက်နိုင်ပေမဲ့..)သေရင်တော့... အနားမှာ မကျွတ်မလွတ်ပဲ ပြိတာ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ် :-)
ကိုအောင် Fri Aug 20, 08:51:00 PM GMT+8
အမရေ ကိုကြီးကျောက် ဖုန်းနံပါတ် သိရတာ ကျေးဇူးဗျာ။
ချိုကျ Fri Aug 20, 10:59:00 PM GMT+8
အစ်မချစ် :( အရိုးထိအောင်ရူးတဲ့ အဲလိုသာရူးရင် ခံနိုင်ရည်မရှိချင်တော့ဘူးရယ်... အရိုးထက်နက်တဲ့ဟာရှိရင်လဲ ရူးရမလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ်ဗျ :( တော်ပြီ ငိုမဲ့ ငိုမဲ့ နဲ့ ပြန်ပြီ :)
blackroze Fri Aug 20, 11:51:00 PM GMT+8
Ingjin Sat Aug 21, 10:07:00 AM GMT+8
စိတ်မကောင်းစရာ ကဗျာလေးကိုဖတ်အပြီးမှာ သီချင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ရော မင်းအုပ်စိုးကိုရီရလွန်းလို့ အူတက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။ .... ခွိခွိ...
Anonymous Sat Aug 21, 11:11:00 AM GMT+8
ဒို့လည်း ဒိုးလုံးသီချင်းတွေကြိုက်တယ် အရိုးထိအောင် တော့ မရူးဘူး ဘူး အရိုးနားက အသားတော့ စားတယ် ပိုချိုတယ်
အဖြူရောင်နတ်သမီး Sat Aug 21, 08:10:00 PM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Sun Aug 22, 10:07:00 PM GMT+8
ဒိုးလုံးသီချင်းတွေနဲ့ မရင်းနှီးဘူး အစ်မ။ ခုသီချင်းတော့ နားထောင်သွားတယ်။ အမ်တီဗွီက ရိုက်ထားတာ နဲနဲပေါတယ်နော်။ :-/
မြစ်ကျိုးအင်း Mon Aug 23, 12:58:00 AM GMT+8
ကျွန်တော်က အရိုးထိအောင် ချစ်မိလို့ အရိုးထိအောင်ရူးပြီး အရိုးထိအောင် လွမ်းနေခဲ့မိတာဗျ..
အခုတလော အလုပ်များလို့ အိမ်လည်ပျက်ကွက်နေတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
ညီမလေး Thu Aug 26, 05:13:00 PM GMT+8
အရိုးထိအောင်လား...??? မရူးချင်ဘူး ချစ်လဲမချစ်ချင်ဘူး လွမ်းလဲမလွမ်းချင်ဘူး ......